Tsy misy rano ve ny Garmin Edge 530? - Garmin
Tena > Garmin > Garmin edge 530 - boky feno
Garmin edge 530 - boky feno
Tsy misy rano ve ny Garmin Edge 530?
Rob eto. Manantena aho fa mandeha tsara ianao.
Te hampiseho fampiharana tena tsara sy tsara azonao ampiasaina ianao hampifangaroanao an'i Levo na Kenevo anao manokana. BLEvo no iantsoana azy. Eny, mety efa nampiasainao angamba ianao na naheno an'io, saingy misy fiasa famonoan'olona roa tiako hizara aminao fa nampiasa Garmin na Wahoo na karazana GPS hafa aho satria nanao telefaona tena mora vidy tokoa ianao mividy.
ba kiraro fihodinana ririnina
Io dia antsoina hoe Blackview BV6000. Android io. 100 kilao ny vidiny ary ny bara ihany no ampiasako azy.
BLEvo ihany no ampiasaiko. Manana bateria maharitra mandrakizay izy io. Tena matanjaka izy io, tsy mahazaka rano, ary mandeha eo amin'ny bara ary ho hitanao ao amin'ilay lahatsoratra nataonay.
Ankehitriny ny BLEvo dia fampiharana an'ny Developer iray izay mpankafy an'i Levo sy i Kenevo ary misy zavatra an-taonina azonao atao amin'izy ireo. Manomboka amin'ny fanitsiana tsara ny bisikiletanao hatramin'ny antsipiriany. Ankehitriny dia ampiasako amin'ny zavatra roa io.
Voalohany indrindra amin'ny fanaovana an-tsarintany. Afaka mandeha amin'ny GPS ianao izao ary mandamina ny làlanao. Hanao izany isika afaka fotoana fohy, hasehoko anao ny fomba hanaovana izany, ary avy eo azonao atao ny misintona izany amin'ny telefaonao ao BLEvo ary afaka mahazo GPS amin'ny findainao ianao, izay tena milay tokoa.
Tena mandaitra izy io. Ary ny faharoa dia ny refin'ny fo. Ka ampifandraisinao amin'ny bisikiletanao ny fonao.
Fantatro fa toa hadalana io fa hasehoko azy fa ny zavatra voalohany hataontsika dia ny mankany amin'ny tranonkala iray ary mamorona làlana, ary ny tranonkala dia antsoina hoe gpsies.com. Ka ho entiko izao izany. (mozika malefaka) Ary ny hataoko dia ny mamorona làlana ary misy sari-tany izy ary tsindrio fotsiny ara-bakiteny ilay lalana ary manintona ny làlana tianao ianao.
Ny zavatra lehibe dia efa betsaka ireo anaran-dia. Andao lazaina fa te-handeha amin'ny làlan-tokontany na làlana manokana efa henonao ianao na làlana efa henonao ary nanontany tena ianao hoe ahoana no ahatongavana any satria manao izany ianao dia afaka mahita ny anaran'ny làlana amin'ny sarintany. Ka hamorona làlana aho, ary araka ny hitanao, dia tena mora tokoa ny manao làlana.
Tsindrio ara-bakiteny fotsiny ny làlana tadiaviko ta Avy amin'ny fiarako, fantatro hoe aiza no hametrahako ny fiarako ary hamita izany lalana izany aho, ary raha tsy manana an'io làlana io aho, ny fomba mora indrindra dia ny mandefa azy amiko irery mandefa mailaka . Niditra tao amin'ny mailako aho, ny kaontiko Gmail, ary raha vantany vao manokatra ity mailaka ity ianao dia tafiditra ao anaty BLEvo ilay rohy. Ka fomba tena tsara hanaovana sari-tany.
Azonao atao koa ny misintona sarintany, fa raha te-hanao ny làlanao manokana ianao, ity dia fomba tena tsara handefasana azy io amin'ny telefaona Android anao ary hampiasa BLEvo. Ka hanandrana an'ity làlana ity izahay ary tiako haseho anao ihany koa ny zavatra ilaina amin'izany. Vao nisintona ny lalanay izahay, nitaingina ny fiatombohana, izay ilay XL Fender, ilay Crud Guard XL.
Nisy olona roa tao amin'ny lahatsoratro farany nanontany hoe inona izany. Mandritra ny 30 pounds eo ho eo dia tena tsara izy ireo ka vao avy namoaka ilay làlana izahay ary tena mahafinaritra izany satria fantatrao fa te-hitsivalana ianao ary rehefa mivoaka eto ianao ary ny hitanao dia ala fantatrao hoe aiza ny afobe? lalamby? Tsara tokoa ity mahita an'io. Ka namolavola ny làlako aho izao, handeha ho any BLEvo aho izao ary handeha hanara-maso ny bisikileta izahay avy eo handeha ho any GPS sy hisintona sarintany ary hanome anao io zotra Show iray io.
Ka, hitanao ny lalana nataoko, dia io izy. Sintomy ny GPX, andao handeha, vita daholo. Ary izao ity làlana ity dia tafiditra ao anaty diako, ka tohizako ny Ride, andao handeha ianao, afaka jerenao ny toe-javatra nampidirintsika rehetra, ary avy eo dia ho hitanao ny saritany, ka napetrako fotsiny ny fiarako, teo amin'ny kely aho zana-tsipìka any ary hanaraka ny làlana aho ary manana GPS izahay izay tena milay.
Ka noho izany, amin'ny sarintany azonao jerena, manana ny fitepon'ny foko any ianao, fitempo 139 isa-minitra ary ny bateria, 98 isan-jato ao amin'ny Kenako. Tsara izany, mandeha tsara. Noho izany dia hitako fa mahasoa tokoa ity rehefa te-handamina làlana mbola tsy nalehanao ianao hatrizay ary mametraka fijanonana na teboka na fomba fijery mety tianao ahatongavana any.
Tsara fotsiny, endri-javatra kely tena tsara sy tsara fotsiny. Ka tsy mila fitaovana GPS misaraka ianao. Eny ary, alohan'ny hahatongavantsika any amin'io havoana io dia mideza be.
Hanazava ny sasany amin'ireo tena mampiavaka, tena mahafinaritra tokoa natsangana tao amin'ny BLEvo aho. HR hendry sy hery matanjaka. Izany dia nilaza, raha fintinina, azonao atao ny mametraka ny bisikiletanao hanana ny tahan'ny fanampiana ny bisikiletanao izay mitaky tahan'ny fo iray, izay mahagaga fotsiny.
Ohatra, ndao atao hoe manao fanatanjahan-tena ianao ary te hihena kely ary te hitandrina ny tahan'ny fitempon'ny fonao amin'ny fitempon'ny 140 isa-minitra. Raha ny mahazatra dia mivoaka ianao hahafantatra fa mety tsy manana mpanara-maso tahan'ny fo ianao, afaka mandeha miala voly fotsiny. Fa raha miasa ianao ary maniry ny ho ao amin'ilay faritra mety handoroanao kaloria kely na hiasa amin'ny tahan'ny fo manokana dia azonao atao ny mametra ny tahan'ny fo sy ny hery fa tsy mila mampiasa ny maody any am-by. dia ny fihazonana ny tahan'ny fitempon'ny fo ka aleo miteny hoe te-hisafidy fitempon'ny 140 isa-minitra ianao ary ny hataonao dia ao anaty fikirakirana, hiteny ianao hoe: 'tadiaviko ny fitempon'ny foko,' ny ahy dia 160, 'amin'ny 160 kapoka isa-minitra ', ary ny moto amin'ny bisikileta dia hampitombo ny haavon'ny fanampiana miankina aminao.
Satria ny fihenan'ny foko dia miakatra mihoatra ny kapoka 160 isa-minitra, izay mety hiakatra amin'ity havoana ity eto, hampitombo ny fanampiana ny maotera ny bisikileta. Rehefa midina ambanin'ny 160 ny tahan'ny foko dia mihena ny fanampiana amin'ny bisikileta ary miara-miasa ny BLEvo hitazomana ny tahan'ny fitempon'ny foko 160 isam-minitra. Tsara izany, ary eo ambanin'io bisikileta fanofanana io dia mahita 180 watts ianao, ka izany dia toa ny haben'ny watts apetrako amin'ny pedal.
Ary avy eo ny bisikileta dia hataoko ny sisa amin'ny fanampiana. Nilaza aho fa te-hanana herinaratra 180 watt foana amin'ny bisikileta. Mahafinaritra ve izany? Mifandray amin'ny bisikiletanao ny fonao.
Adala izany, sa tsy izany? Miakatra ny tahan'ny fo. (Mivezivezy amin'ny kodiarana bisikileta) Mandehana mamaky ny kodiarana. (Miodina ny kodia bisikileta) Mandrosoa, 160.
Ka izao ny motera bisikileta manome fanampiana bebe kokoa. Ka nahatratra ny tanjoko 160 aho, ary raha milatsaka izy dia hampihena kely ny herin'ny motera ilay bisikileta, phew. Fiofanana tsara.
Tena tsara, ary afaka manana izany amin'ny zavatra tianao rehetra ianao. Tena mahafinaritra tokoa izany Tena tsara izany, sa tsy izany, tena fetsy. Noho izany, ny tahan'ny fitempon'ny fonao dia mifamatotra amin'ny bisikiletanao, mifamatotra amin'ny moterao izy io, ary noho izany dia manohy manome fanampiana hampihena ny fitempon'ny fonao amin'ny tanjon'ny kendrenao.
Mamiratra amin'ny fiofanana. Mamiratra mba hitazomana ny fitepon'ny fonao tsy tapaka. Tsy mila miahiahy amin'ny fanovana ny haavon'ny fanampiana amin'ny bisikileta ianao.
Toy ny amin'ny maody automatique feno ihany io. Endri-javatra lehibe natsangana ao anatiny. Tiako izy izany.
Tsara izany. Oh adala izany, asa tsara fa manana ilay crud Guard XL fender isika, marina, andao handeha. Azonao atao ny mahita toerana maromaro.
Azonao atao ny mahita ny hery apetrako amin'ny moto. Eny, mety tsy hahaliana anao akory izany fampahalalana izany. Tsy ilainao akory ny telefaona amin'ny fantsona satria afaka manao zavatra be dia be ianao amin'izany zavatra izany ary apetraka ao am-paosinao fotsiny, na azonao atao ny manalavitra ny efijery, fa namboariko mba hahafahako mihazakazaka izao, tsy misy herinaratra bisikileta, zero ny cadence.
Manomboka mitondra pedal aho izao, hitanao fa manosika hery 260, 70 watt aho, ary hitanao fa 99 ny cadence. Mahaliana fotsiny izany. Eny ary, andao hiverina amin'ny sarintany.
Ka azoko antoka fa misy fiolahana. Eny, andao handeha. Noho izany, amin'ny mena 12.
Swinley ity. Mihetsika mandeha ho azy ny sari-tany. Nolazaiko anao ny zavatra hataoko satria tsy te-ho tonga aho, fantatro hoe manao ahoana ny fahitana an'ity miverina ity ary misy lehilahy 38 taona izay mifoka rivotra.
Hanova azy aho, hanova ny mpanampy. Ka ny hataoko dia, hiteny aho hoe, 'Andraso, tsy te-hamaza aho' 160. 'Handeha 135, milamina tsara aho.
Eny, afaka mahatsapa azy eo noho eo aho, ary mety ho maheno ny motera miasa kely kokoa ianao satria fantany fa ny tahan'ny fitempon'ny fony dia 135. Ka miverina amin'ny sari-tany isika, any ianao no manana azy. Nanjary mena.
Toy ny hoe: 'Tapitra ianao. Mitohy izany. ' Ankehitriny dia mazava ho azy fa afaka manome anao mpanohana betsaka toy ny motera izy.
Ka hisy ny teboka sasantsasany izay, toy ny mitondra fiara tsy misy ireo dia hampitomboinao ny tahan'ny fitempon'ny fonao sy ny fanampiana ny motera anao. Tsy afaka manome anao intsony io. (Feon'ny kodiarana bisikileta) Ie.
Milomano taloha tsara. (Miodina ny kodia bisikileta) Oh, mahafinaritra be izany. (Miodina ny kodiarana bisikileta) (mihomehy moramora) Tiako izany.
Ankehitriny ianao dia afaka mahita ny fitempon'ny foko, 178, satria ianao manidina amin'ny fiolahana sy manandrana mamily ny fiolahana, dia mbola betsaka ny zavatra azoko atao amin'ny fampihetseham-batako, saingy izao tsy afaka manampy ahy intsony ny bisikileta. Tena midina aho izao, izaho izany. Tiako ny Kenevo, mpamaky etona mihoatra ny zava-drehetra.
Kanto fotsiny. Tsara any ambany. Ka mena mahitsy, inona izany, 15? Ary hitako fa nitombo ny fitempon'ny foko tamin'ilay lalana ezahiko tondroina ny fidinan'ny Kenvno ary nihetsika fotsiny io ary tsy misy mpanampy moto mihitsy eo.
Fa raha vantany vao nivoaka ny lalana aho. Tsapako fa feno tanteraka ilay bisikileta. Niezaka ny hampidina ny foko sy hidina ary hidina.
Mandritra izany fotoana izany dia manaraka ny sari-tany aho hahitako izay alehako, saika handeha eo amin'io lalana kely io isika, eo ho eo. Handeha any aho ary hihaona amin'ireo lalana roa any. Tena tsara.
Tena tsara sa tsy izany? Bisikileta maranitra (Bison'ny kodiarana bisikileta) (mihomehy moramora) (kodiaran'ny bisikileta) Eny. (Miodina ny kodiarana bisikileta) (mihomehy moramora) Tiako izany. (Kodiarana bisikileta bisikileta) Ityvovo dia tsara tokoa amin'ity karazana zavatra ity. (Feon'ny kodiarana bisikileta) - Nanalavitra ny sari-tany nomena ianao - Aah, henonao ve izany? Mampatahotra ahy izany.
Raha ny tena izy dia tsy napetrako tamin'ny làlana ity fa aza manahy fa mbola hataoko ihany fa nilaza tamiko fa tsy tao anaty sarintany aho. Tsaroako izao, te-hanao lalana somary hafa kely aho, saingy- nifindra niala ny sari-tany efa natao ianao.- Eny, azonao.
Afaka mahazo finday avo lenta finday finday Android. Toy ny nolazaiko fa 100 pounds izany ary efa roa taona izao ary tsy hampiasa izany amin'ny zavatra hafa ankoatry ny BLEvo sy GPS aho. Ka 100 pounds, ohatrinona ny vidin'ny Garmin? , ohatra? Azoko antoka fa tsara ny Garmins, manana Wahoo Bolt aho saingy ity iray ity dia miasa tsara lavitra noho ny Wahoo Bolt ary mahita zava-baovao, mivoaha ary mitady fomba vaovao, iza no manahy hoe lehibe inona izany rehefa manampy anao hahita ny anao izy lalana? Ary mila habe iray ihany ianao, satria raha kely loatra dia tsy hitanao.
tokony hanao fanazaran-tena alohan'ny hatory aho
Te handalo 100 watt fotsiny aho. 100 watt ary tiako ny hihazakazaky ny polongako, andao atao hoe 115. (Buzzan'ny kodiarana bisikileta) Amin'ireto keneo ireto dia afaka mahazo rivotra ianao. (mihomehy moramora) Ampahafantaro ahy ny hevitrao momba an'io.
Tena mahaliana ahy ny fomba fiasa, ny fampidirana amin'ny bisikileta, ny fanaraha-maso ny tahan'ny fo sy izay zavatra tsara rehetra, ny angona rehetra sy ny fandalinana, tena mandeha tsara izany, koa raha tianao dia afaka miditra lalina tokoa ianao ny antsipiriany rehetra, na azonao atao dia avelanao fotsiny izy, misy toerana maro mialoha. Azonao atao ny mamela izany raha tianao, saingy mieritreritra aho fa mahafinaritra. Heveriko fa ny vidiny, misy fandaharana marobe tsy mampino natsangana ao anatiny, ary raha te hihoatra ny fenitra Misionera Fanaraha-maso omen'ny manampahaizana anao ianao, dia azo antoka fa mendrika hanandrana izany.
Andramo àry. Tena nahagaga ahy indrindra ny momba ny sarintany rehetra hampiasaiko. Manantena aho fa tianao ilay lahatsoratra.
Misintona raha tsy izany, asio ankihiben-tanana raha tsy izany. Omeo hevitra aho na inona na inona, tsara, ratsy, tsy mampaninona ahy izany. Mandalina foana aho.
Veloma. (Mozika faly)
Sarintany aiza amin'ny Garmin Edge 530?
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoko anao ny fomba fanolorana Komoot misy amin'ny fitaovanao Garmin. Ampifandraisinay amin'ny finday ny findainao, mampiasa Edge Discover aho, ohatra, avy eo mametraka ny fampiharana Komoot IQ amin'ny fitaovanao izahay ary mampandeha azy avy eo. Angamba mbola tsy manana fitaovana hampidirina ianao, avy eo jereo kely fotsiny ao amin'ny faladiany raha hijery fa mora izany.
Komoot dia rafitra fitetezana ivelany ary manolotra safidy maro isan-karazany amin'ny fikarohana, fandrindrana, fanondranana na fanafarana fitsidihana na fanitsiana ary famoahana azy ireo avy eo. Ny andian-tsariko dia tokony hanampy anao hahafantatra an'i Komoot sy hahafahanao mampiasa azy io betsaka.
Mamoaka torolàlana vaovao momba ny fitetezana ivelany aho. Ny zavatra tsara tokony hatao dia ny misoratra anarana amin'ny fantsoko, izay azo atao haingana eo ankavanana eo ambanin'ilay lahatsoratra ary ampandehano ny lakolosy sao tsy diso lahatsoratra iray ianao. Tena hampiasa Komoot amin'ny smartphone ianao.
Azonao atao ihany koa ny manindry Komoot Mampiasà fitaovana mifanentana amin'ny mpanamboatra Install Garmin. Ho an'ity lesona ity dia hiara-hiasa izahay hitondra Komoot ao amin'ny solo-tananao bisikileta Garmin Edge ary hampihetsika azy. Avy eo ianao dia manana fidirana mivantana amin'ireo fitsangatsanganana kasainao hatao, ireo fampisongadinana narosonao ary ireo tahirinao voatahiry.
Raha tsy fantatrao raha mety amin'ny fampiharana Komoot ny fitaovanao, araho ny rohy izay nampidiriko tao amin'ny famaritana lahatsoratra ho anao. Ho hitanao eto ny lisitry ny fitaovana Garmin rehetra mifanentana amin'ny Komoot mivantana ao amin'ny Garmin Connect IQ Storeview. Aorian'ny hanokafanao ny rohy dia kitiho fotsiny ny kiheba Compatible Devices ary tadiavo ny fitaovanao.
Raha tsy hitanao ao anaty lisitra io dia azo inoana fa tsy ho afaka hametraka Komoot amin'ity fitaovana ity ianao. Amin'ity tranga ity dia homeko rohy eo ambanin'ilay lahatsoratra ianao izay hitondra anao any Amazon, izay nanoratako ny lisitry ny fitaovana mifanaraka aminao. Mba hamenoana an'ity lesona ity dia tokony hampandeha ny Bluetooth amin'ny finday avo lenta ianao.
Ampidiro ary atombohy amin'ny finday avo lenta ny fampiharana Garmin Connect Mobile. Raha mila fanampiana ianao, ny lesona ampianariko eo amin'ny zoro ambony ambony dia hanampy anao hanangana Garmin Connect Mobile. Ny mpilalao sasany dia tsy mampiseho na inona na inona any ankehitriny, ka dia hatoroko anao ny rohy lahatsoratra amin'ny famaritana eto ambany ny lahatsoratra.
Ity dia mihatra amin'ny tolo-kevitra momba ny lahatsoratra hafa ato amin'ity lahatsoratra ity, avy eo apetraho ny app Garmin Connect IQ izay azonao ampiasaina amin'ny fanatsarana. Mitadiava ary apetaho ireo fitaovana Garmin. Avy eo dia mila mampifandray ny piraofilina Komoot sy ny mombamomba anao Garmin Connect ianao.
Mazava ho azy fa hahazo fanampiana avy amiko koa ianao. Zahao ny lahatsoratra eo amin'ny farany ambony havanana. Raha tsy misy aseho eo dia mba jereo ny lahatsoratra araka ny voalaza etsy ambany.
Vonona ny zava-drehetra ve ianao? Dia andao hanomboka! Voalohany, mila mampifandray ny Garmin Edge anao amin'ny finday avo lenta ianao amin'ny alàlan'ny Garmin Connect. Sokafy ny Garmin Connect Mobile, mankanesa any amin'ny menio ary safidio ireo fitaovana Garmin. Alefaso ny Garmin Edge anao ary sokafy ny menio eo ambany ankavia, fidio ny endri-javatra an-tserasera, ary avy eo ampiraiso ny finday avo lenta.
Tsindrio ny 'Add Device' eo amin'ny faran'ny smartphone. Rehefa hitan'ny Garmin Connect Mobile ny sisinao, tsindrio Connect. Hamafiso fa te hampifandray ianao.
Avy eo ampidiro ny kaody aseho eo amin'ny Edge ary tsindrio Vita. Rehefa vita tsara ny fampiharana sy ny Edge nataonao, dia hamafiso ny tsiroaroa. Tsindrio Next amin'ny fampiharana.
Hotsinganinay eto ny fizarana ifotony an'ny Edge, satria tsy izy ireo no fototr'ity lesona ity. Tsindrio Sync izao. Garmin Connect dia nampifangaro ny Edge-nao.
Kitiho ny Finish ary avy eo Setup. Vitanao izao ny nanambatra ny Garmin Edge anao tamin'ny finday avo lenta ary nampifandraisinao tamin'ny app Garmin Connect Mobile. Andao hofintinintsika fohifohy ny fifandraisana amin'ny smartphone.
Mandrosoa ny rindranasa Connect Mobile ary mandehana amin'ny fitaovana Garmin, mankanesa any amin'ny menio ankavia ao amin'ny Edge, avy eo mandehana amin'ny Online Features ary ampiraiso ny smartphone. Safidio ny Add Device ao amin'ny app ary araho ny torolàlana hafa. Andao hapetraka eo amin'ny Edge-nao ny fampiharana Komoot.
Azonao atao ny mahita ny zava-drehetra momba ny Komoot sy ny fiasa ao amin'ireo lahatsoratra eo amin'ny zoro ambony ambony amin'ny lisitra. Nampidiriko tao amin'ilay famaritana ihany koa ilay rohy. Sokafy ny menio fampiharana Connect ary miverena amin'ny Garmin Devices.
Safidio ny Edge anao, avy eo safidio ny Hetsika, fampiharana ary maro hafa. Safidio avy eo ny hetsika sy ny fampiharana. Aza miraharaha ny doka amin'ny app-ko.
Mandehana misintona fampiharana hafa etsy ambany. Eo ankavanan'ny farany ianao dia afaka mahita ny fitaovana miasa ho an'ny IQ Store. Raha manana fitaovana Garmin marobe ianao ary misy iray hafa miseho izao, kitiho eo amboniny, avy eo mandehana mankany Select amin'ny farany ambony, kitiho ny Edge anao ary miverena mankany amin'ny ankavia ambony.
Eo amin'ny gorodona na amin'ny sisiny izao ny fitaovana ampiasainao. Ao amin'ny ankavia ambany, kitiho ny IQ Store. Ity dia miasa ho an'ny mpampiasa amin'ny fitaovana iray ihany; mitohy eto ny tutorial.
Ny Komoot dia mety efa tao anatin'ny sokajy naroso. Tsindrio Komoot, avy eo paompy Install. Raha tsy mandeha ho azy ny fampidinana dia miverena amin'ny fampiharana Garmin Connect Mobile ao amin'ny topy maso amin'ny fitaovana.
Eo akaikin'ny sisinao, kitiho ny bokotra fampifanarahana. Mety haharitra vetivety ny fampifanarahana. Rehefa vita ny fampifanarahana dia safidio ilay fitaovana.
Mandehana any amin'ny activités, fampiharana ary bebe kokoa, avy eo activitities & applications. Tokony hapetraka eo amin'ny Edge ny Komoot. Andao hofintinintsika indray ny fametrahana.
Ao amin'ny fampiharana Connect Mobile, mankanesa any amin'ny Edge anao, avy eo ny activités, avy eo ny activités indray. Safidio ny fampidinana fampiharana hafa. Ao amin'ny IQ Store dia mety mila mifidy ny fitaovanao indray ianao, sokafy ny pejy Komoot ary kitiho ny Install.
Mety mila mila mampifangaro ny Edge indray ianao. Tsy mbola afaka mampiasa Komoot ianao. Dingana iray hafa no ilaina.
Fa te hanome torohevitra kely anao aloha aho. Azonao atao ny mahita ny fantsoko ao amin'ny vakizoro Community amin'ny app na amin'ny browser Browse momba ny lahatsoratra navoaka, drafitra, fanadihadiana ary vaovao. Azonao atao koa ny miditra ao amin'ny vondrona manampy ahy ao amin'ny Facebook, izay namboariko ho lohahevitra daholo ny lohahevitra rehetra mba hahitan'izy ireo sy hianarany lohahevitra.
Ampiako ny rohy amin'ilay famaritana etsy ambany. Miverena amin'ny sisinao ankehitriny. Eo amin'ny farany ambany ankavanana, tsindrio ny IQ, izay ahitanao ireo fampiharana napetrakao avy amin'ny magazay IQ.
Avy eo paompy amin'ny Komoot. Mangataka anao hiditra kaody izao ny fitaovana. Tsindrio ilay rohy izay miseho.
Handray hafatra Mampifandray amin'ny finday avo lenta ianao, izay nofidinao ary izay hitarika anao mankany amin'ny tranokalanao. Tokony tsy ho ao amin'ny finday avo lenta izao Vohay ny navigateur mahazatra anao, ka sokafy amin'ny tanana. Ao amin'ny pejy miseho dia tsy maintsy miditra ao amin'ny kaontinao Komoot aloha ianao.
Avy eo ampidiro ao amin'ny kaody nasehon'i Edge. Raha ekena ny kaody dia paompy Avelao ny fidirana. Mila miditra ao amin'ny kaontinao Connect ianao izao.
Avy eo azonao atao ny misafidy raha avela halefa amin'ny Edge startKomoot ny hetsikao. Rehefa avy misafidy ianao dia mandehana mitahiry. Avy eo ianao dia manaiky ny lalàna momba ny fiarovana ny angona.
Vonona ny hafatra! mampiseho aminao fa nanetsika soa aman-tsara ny Komoot teo amin'ny Edge ianao. Andao hiaraka hiara-hiasa izany isika, hampavitrika ny Komoot amin'ny sisiny. Safidio ny Komoot ao amin'ny Edge eo ambanin'ny IQ, kitiho ny rohy, kitiho ny hafatra amin'ny finday avo lenta, raha ilaina dia sokafy tanana ny navigateur mahazatra.
Midira ao amin'ny Komoot, avy eo ampidiro ny kaody ary araho ny torolalana. Ao amin'ny Edge dia ho tsikaritrao fa efa nomen'i Komoot anao ny fandaharana kasainaoTours, kitiho ny Profiles eo an-tampony. Afaka mandray fitsangantsanganana voaomana ianao izao, mampiasa ny fampisongadinana sy ny fanangonana anao hitety.
Hasehoko anao ny fampiasana feno ny Garmin BaseCamp amin'ny lahatsoratra iray hafa miaraka amin'ny fampiharana Komoot Connect IQ. Raha te hanandrana ny fampiasana Garmin BaseCamp ianao dia ity no playlist eo ankavanan'ny havia ho anao. Azavaiko aminao ny tontolon'ny Google Maps sy MyMaps amin'ny lisitra an-kavia farany ambany.
Manantena ny fanontanianao sy ny hevitrao aho ary koa ny ankihiben'ity lahatsoratra ity.
Satnav aiza no tsara indrindra?
Izay Garmin Edge ho an'ny MTB?
Garmin Edge530MTBBundle - bisikileta bisikileta amin'ny solosaina bisikileta tsy misy tariby. nyGarmin Edge530 no solosaina bisikileta GPS mety indrindra amin'ny bisikileta syMTB. Miaraka amin'ny androm-piainan'ny bateria hatramin'ny 20 ora sy ny sarintany efa napetraka miaraka amin'ny fitetezana isaky ny mandeha, afaka somary lava kokoa ny lalana, tonga hatrany amin'ny toerana tianao haleha ianao
Ny solosaina bisikileta dia nahazo fancier be tao anatin'izay taona vitsy lasa izay ary manana taonina miasa izao. Zavatra avy amin'ny fahafahanao manara-maso ny dianao mankany amin'ny mahita làlana vaovao sy zavatra maro hafa hidirantsika. Ahoana no ahazoana tombony betsaka amin'ny solosainao bisikileta GPS. (Thud) (fitsofana feo amin'ny rano) (mozika elektronika mangatsiaka) Garmin dia mpiara-miasa eto amin'ny GMBN, noho izany hampiasa ny fitaovan'izy ireo amin'ity lahatsoratra ity aho, saingy ireto torohevitra ireto dia tokony hiasa amin'ny marika misy fitaovana na ny ankamaroan'izy ireo. andao hatomboka amin'izay mora ny fampiasana.
Nihatsara be ny raharaha teto. Tapitra ny andro fanesorana ny fitaovanao eo am-pelatanana ary ampifandraisina ara-batana amin'ny solo-sainanao amin'ny seranana USB. Segondra vitsy ara-bakiteny taorian'ny nijanonako nijanona teo amin'ity solosaina ity dia miaraka amin'ny app-ko amin'ny findaiko ary avy eo amin'ny apps hafa ampiasaiko toa Commute, Strava, na inona na inona.
Ny ankamaroan'ireo fitaovana ireo dia mandrindra tsy misy tariby ankehitriny. Toy izany koa ny zavatra alohan'ny mandeha. Azoko atao ny mipetraka ao an-trano manoloana ny solosainako, misotro kafe eraky ny hafanana aho rehefa tsy misy mpampivelona, ​​manomana ny làlako, mamonjy save ary, toy ny hoe amin'ny majika, mandrindra tsy misy tariby izy ary vonona hampiasa amin'ny solosainako. . (mozika elektronika mangatsiatsiaka) (bisikileta mihetsiketsika sy mikapoka amin'ny tany mikitoantoana) Te hahita toerana mety hametrahana ny solosainanao ianao, indrindra raha mampiasa azy io ianao amin'ny fitetezana arak'izay hahitanao ny efijery amin'ny fotoana rehetra.
Mahita olona sasany mametraka azy eo ambonin'ny fantsona ambony ianao miaraka amina kasety foam na kasety 3M na zavatra hafa. Aleoko ajanona fotsiny amin'ny fomba hafa, ka manana an'ity bisikileta an-tendrombohitra Garmin ity aho, izay mahafinaritra satria mamela ny solosainanao hipetraka eo ambonin'ny fotony, tena milamina. Misy safidy hafa hasehoko anao, avy ao am-paosiko.
Ka ny zavatra aorinan'ny tsena toa an'i Nukeproof dia manamboatra ity satroka ambony ity. Ity raha ny marina dia manolo ny satrony ambony amin'ny headset anao fotsiny. Milamina tsara izany.
Tonga eo amboniny ny solosaina. Na i Garmin manana ireto havoana hafa ireto, ny ankamaroan'ny solosaina dia manana azy ireo koa, izay mipetraka eo amin'ny baranao ary mampiasa peratra O-ohatr'izao, ka azo antoka ihany koa eo amin'ny kitapom-batsy, zavatra tsy tokony ho adino, sao dia lavo ianao ny bisikileta rehefa apetakao toy ny bisikileta mihazakazaka na bisikileta enduro, angamba arosoy any ho any mba tsy ho vaky. Tiako koa ny mampiasa an'io karazana leash io.
Ka afatory izany, tsara, kofehy eo izy, apetaho amin'ny tendrombohitra mba hahalalako azy raha mitehafa tanana mihitsy aho fa tsy ho very aho fa miraikitra amin'ny bisikiletako fotsiny. (mozika elektronika mangatsiaka) Alohan'ny hividiananao ny fitaovanao dia eritrereto hoe inona ny haben'ny singa lehibe tadiavinao, manomboka amin'ny efijery misy habe samihafa ka hatramin'ny bateria, sns. Manana ny Garmin aho, ilay 130, izay kely sy matanjaka.
Mahita ny sasany amin'ireo ekipanao enduro miaraka aminy ianao. Mora tokoa, mazava ho azy tsy misy manakana. 830 Manana ny 1030 eo amin'ny kitapoko aho, ilay tena lehibe.
Manana efijery tena tsara ianao, miloko, afaka manana fampahalalana an-taonina any ianao, tena tsara ho an'ny epic ride, izany no ampiasako mandritra ny andro maro amin'ny bisikileta mihazakazaka, zavatra toa izany, miampy manana bateria lehibe kokoa ianao ao anatiny maharitra kokoa fotsiny izy io, na afaka mitaingina hazavana faran'izay mahery ianao ary mampiasa famantaranandro fanaraha-maso. Manana ny Garmin Fenix ​​aho izay manana zavatra mandroso taonina ao koa. Toy izany koa no manao ny fanarahana ny fanatanjahan-tena ara-batana toy ny dingana, kaloria, fanatanjahan-tena.
Saingy manana bisikileta sy bisikileta an-tendrombohitra izy ka afaka mandoa an'i Komoot aza. Araho ny zotra amin'io. Fa ny zavatra lehibe momba azy io dia ny fampiasana azy amin'ny zavatra toy ny midina na enduro rehefa manandrana manoratra fotoana na mitaingina.
Satria eo amin'ny hato-tànako io, eo foana izy io. Mahafinaritra sy azo antoka any ambony any koa, mety tsy ho torotoro izany raha sendra lozam-pifamoivoizana goavana aho. Mahatsapa fa miafina kely izy io ary azo antoka fa amin'ny bisikileta midina.
Mieritreritra aho fa aleoko manana an'io toy izay manana solosaina eo amin'ny kitapoko. (mozika elektronika mangatsiaka) azo namboarina ihany koa izy io. Ka manana ny endri-javatra IQ i Garmin mba hahafahanao misintona sy mijery apps amin'ny solosainao mba hananana zavatra ao fotsiny.
Noho izany, mila mandeha any aho ka izany dia sarintany sy fampiharana fitetezana. Azoko atao ny manamboatra ny lalako amin'ny solosaiko raha mila ny solosainako aho. Eo ihany koa i Strava ka raha te hampitaha ny tenanao amin'ireo mpitaingina hafa ianao.
Trailforks dia napetraka ao amin'ny Garmin 830 ahy koa, ka raha te hahita làlana tsara ianao, angamba amin'ny toerana mbola tsy nalehanao taloha, dia azonao atao ny manamboatra ny fitaovanao hanampy anao. (mozika elektronika mangatsiaka) Azonao atao ihany koa ny misitrika ny fametrahana ny solosainao ary fantaro izay angona tadiavinao eo amin'ny efijery. Tiako ny hitazona azy ho kely sy karazana vondrona misy azy ireo, noho izany dia manana efijery dimy handosirana aho.
Ny voalohany dia ny angon-drakitrao. Ka manana ny halavirako, ny ora amin'ny andro, ny timer, izany hoe mandra-pahoviana ianao no teny an-dalana, fiakarana tanteraka ary haingam-pandeha ambony indrindra.
Tsy dia manana haingam-pandeha ambony aho matetika, raha ny marina dia manana ny haavoko aho. Azonao atao ny mamafa avy eo. Ary avy eo manana ny sarin'ny sarintaniko aho.
Ka raha mandeha amin'ny fitetezana aho dia mety hampiasaiko matetika. Avy eo manana ny haavo azoko aho. Fantatrao, hitanao fa manana ny sary momba ny halavanao sy ny tenanao ianao.
Izany no nataoko. Izany koa dia misy kompà kely ary ny haavoko dia eo amboniny. Swipe indray, manana kompas aho.
Swipe indray ary manana tahan'ny fitepon'ny fony aho sy ny kisary iray koa. Mety tsy dia ampiasaiko matetika izy ireo, raha ny marina. Ary azonao atao ny manampy na manala azy ireo araka ny itiavanao azy.
Azonao atao ny manangana ny fitaovana rehetra toa izany. Mahafinaritra an'i Garmins raha manova ireo sahan-tahiry tadiaviko aho ka raha te-hanala ny hafainganam-pandeha ambony indrindra aho dia ovao amin'ny zavatra hafa izany, tazomiko fotsiny ny rantsan-tànako dia hiseho miaraka amin'ireo safidy rehetra io. Nahazo ny zava-drehetra tao anatiny, fitetezam-paritra, sary, cadence, tahan'ny fo, hery.
Ka haveriko amin'ny haavoko izany. Azon'izy ireo atao ihany koa ny manana hetsika samihafa izay miaraka amin'ny takelaka data sy ny mombamomba azy ireo. Ka izany no bisikiletako an-tendrombohitra.
Manana ny safidy amin'ny eMTB aho, anaty trano, mazava ho azy, raha ampiasainao amin'ny mpampiofana turbo dia azonao atao ny mamono ireo fotodrafitrasa GPS rehetra, ka ny batery sy ny zavatra tsy ilaiko ihany no voatahiry. Azonao atao koa ny manamboatra azy raha tianao. Ary misy takelaka angon-drakitra samihafa, mora be, misafidy izay hatao ianao.
Ary manome anao ny fampahalalana rehetra ilainao izany ary tsy misy zavatra tsy ilainao. (mozika elektronika mangatsiaka) Efa niresaka momba ny fampiasana fivezivezena aho mba handaminana ny dia, ho fitetezana. Saingy ny fitaovana GPS tsara rehetra dia mety manana rindrambaiko manokana na rindrambaiko an'ny antoko fahatelo.
Afaka mandeha any ianao, manandrana, mandamina ny dianao ary avy eo mandefa azy ireo. Ary mazava ho azy fa mora kokoa ny manaraka an'io lalana io miaraka amin'ny bitsika amin'ny solosainao noho ny fomba sekoly taloha misy sarintany ao anaty kitaponao sy kompà ary mijanona isaky ny 20 minitra hanaovana izany. Hitako fa tena tsara i Komoot amin'ny fitadiavana toerana vaovao sy fiara.
Ary hanao ireo dia lavitra ireo koa. Raha tsy izany dia hiala amin'ny fanahiana ianao ary ho very foana. Fanampin'izay, heveriko fa tena mahafinaritra ny mipetraka eo amin'ny solosainako ary mieritreritra fotsiny hoe mitaingina, mifikitra ary avy eo manoratra daty ao amin'ny diary hanaovana azy.
Ny solosaina sasany, toa ity 830 eto ity, dia manana fahaizana maka course amin'io. Tsy ny fitaovana rehetra no hanana an'ity karazana data tahiry ity, fa ity kosa manana. Fanampin'izany, manana zana-dia ihany koa izy ireo izay tsara idirana, tonga amin'ny toerana vaovao, ao Fort William, tsy fantatro tsara ireo ala ireo, fantaro amin'ny làlan-kaleha ianao ary azonao atao ny manamarina ny làlana any amin'ireo ala ireo ary jereo koa ny toetrany . (mozika elektronika mangatsiatsiaka) Hanaraka anao sy hanoro anao izay alehanao ny fahaizan'ny GPS-n'ny solosainao, saingy mety ho tsara ny mampiditra sensor sasany hampandehanana ny solo-sainanao raha ilaina izany.
Ny mpanara-maso ny tahan'ny fo dia hifandray tsy misy tariby ary hampiseho aminao ireo data ireo eo amin'ny efijery ny tahan'ny fitempon'ny foko izao. Inona ity? 75, fihazakazahana zavatra Toy ny sensor amin'ny hafainganam-pandeha. Manome anao hevitra tsara ny GPS anao, saingy afaka mampiditra zavatra ao amin'ny hub-nao ianao izay hivezivezy ary hahazo hafainganam-pandeha tena marina rehefa mandeha ianao.
Ny mandeha amin'ny crank anao dia tsara amin'ny tanjona ara-pahasalamana. Na koa ny metatra elektrika dia mampiasa ny teknolojia Amplifier Plus hifandray tsy misy tariby amin'ny fitaovanao. Ny fitaovana sasany dia manana rindrambaiko fiarovana sy fanaraha-maso ao anatiny, ka ny accelerometers, izany zavatra izany.
Ary hiasa izany raha lavo avy eo amin'ny bisikileta ianao, handefa hafatra any amin'ny olona maika izany. Na mandeha amin'ny telefaoninao izy io ary mametraka fanairana kely eo. Ary manome anao fe-potoana hialana fotsiny ity mba hahafantaranao fa salama tsara ianao.
Raha tsy izany dia hifandray ny fifandraisanao maika mba hahafahany mamonjy ny ainao. Ankoatr'izay, manana lalan'ny vondrona ianao any amin'izay hahitanao ny toerana misy ny fifandraisanao eo amin'ny sari-tany. Ka raha mandeha bisikileta miaraka amin'ny olon-kafa vitsivitsy ianao ary mety ho hitanao ny halaviran'izy ireo.
Azonao atao ny mampiasa ny ankamaroan'ny solosaina bisikileta hanombanana ny fiofananao amin'ny alàlan'ny fandefasana ny angona amin'ny rindrambaiko, zavatra toa ny Training Peaks, izay ahafahanao mihady ny angona. Na asaivo misy mpanazatra manokana mandefa ny drafitra fampiofanana anao amin'ny solosaina. Tena tiako ny mijery ny Garmin Connect ahy mba hahitako ny kilaometatra firy, ny ora nahaterahako tamin'ity herinandro ity, nefa koa ny toerako amin'ny fiofanana mba hahitako raha nihatsara aho na mety mila fitsaharana mihitsy.
Ny fametrahana tanjona dia mety ho tena tsara ihany koa. Ampiasao ny rindrambaiko hanome tsiny ny tenanao. Ankehitriny ianao dia afaka mametraka zavatra toy ny ora maromaro na kilometatra manokana isan-kerinandro.
Na afaka mandray anjara amin'ny fanamby ianao, izany hoe dingana maromaro na zavatra hafa. Fantatro fa nanao izany bitika i Strava. Ka tena tsara ny mampiasa fialamboly kely hahalavorary.
Garmin koa dia manana fanairana amin'ny bisikileta hahafahanao mametraka izany. Mazava ho azy fa tsy azo antoka toy ny fanidiana tsara azy io. Raha ny tena izy dia amboarinao amin'ny kaody passcode io, manisa kely mba hametrahana ny bisikiletanao, ary avy eo rehefa misy olona manomboka Mihetsika na mitaingina bisikiletanao dia hanaitra fanairana amin'ny singa lehibe, fa mandefa fampandrenesana amin'ny telefaoninao ihany koa mba ho fantatrao mandeha ny bisikiletanao.
Misy toro-hevitra vitsivitsy hanampy anao amin'ny fanararaotana tsara ny solosaina bisikileta GPS anao. Mety mendrika ihany koa ny fizahana ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa sy ny fitsidihana ny faritra fanohanana an-tserasera amin'ny tranokala ho an'ny fitaovana anananao, mety hahita zavatra hafa ianao. Raha te hahita lahatsoratra momba anay mampiasa ny fitaovanay Garmin izahay.
Ho an'ny fivezivezena, izaho mifanohitra amin'i Blake, izay ampiasantsika an'io endri-javatra io, jereo hoe iza no manana fantsona betsaka indrindra ary ahoana no hanatsaranao izany. Any ambony any koa ny fomba handaminana ny diany miaraka amin'ny Commute ary handefasana izany amin'ny fitaovana iray ary antenaina fa hahita làlana vaovao. Tsindrio raha te hampiasa ny solosainan'ny bisikiletanao ianao ary tsindrio ny bokotra famandrihana raha mbola tsy nanao izany ianao.
Inona no atao hoe Grit Garmin?
Fampiasana vaovao sy tarehimarika manan-danja MTB. Ny metrika vaovao iray hafa ho an'ireo bisikileta an-tendrombohitra dia izanyherimpo-Ny sandam-bola izay mamadika ny fahasahiranan'ny làlana mankany amin'ny ambaratonga miorina amin'ny sandan'ny haavony, GPS ary ny hafainganam-pandeha.1 2019.
Ohatrinona ny vidin'ny bisikileta sat nav?
bisikileta-Navis avy amin'ny Garmin dia efa zavatra iraylafo. Eto ianao dia hahita zavatra amin'ny vidiny 150 hatramin'ny 250 euro.
Garmin iza no tsara indrindra?
Toerana voalohany: Tena tsara (1.3)GarminEdge 130 Plus. Toerana faha-2: Tena tsara (1.5)GarminEdge 530. Toerana faha-3: Tsara be (1.5)GarminToerana faha-4 Edge Edgeth: Tsara (1.6)GarminEdge 830.
Garmin iza ho an'ny bisikileta?
Raha te-hamitana tarika fiofanana voaorina ianao ary mitady solosaina bisikileta miaraka amina fivezivezena, fa tsy mila fampisehoana lehibe eo am-pelatanana,f? rizany noGarminEdge 820 ny safidy mety.2 2019.
Fa inona ny GRIT?
nyherimpodia refin'ny fahasarotan'ny lalan'ny bisikileta an-tendrombohitra. Izy io dia mandray an-tsaina ireo anton-javatra toy ny fahasarotan'ny làlana sy ny zoro fihodinana amin'ny làlana. nyherimpo-zava-dehibeamin'ny làlambe iray dia tokony hijanona ho mitovy amin'ny mpitaingina azy.
Inona no grit sy mikoriana?
Ny MTB Dynamics dia mampiseho an'izanyMikoriana,herimpoary ny fitsangatsanganana fitsangatsanganana bisikileta an-tendrombohitra. nyMikorianamamaritra ny habetsaky ny tsiranoka ary izanyherimpomamaritra ny fahasarotana. Ny elanelam-potoana voasarona, ny fotoana amin'ny rivotra sy ny toeran'ny fitsambikinana dia ekena ary marina mahavariana.27. 2019.
Solosaina GPS tsara ve ny Garmin Edge 530?
Rehefa mividy amin'ny alàlan'ny rohy amin'ny tranokalanay izahay dia mety hahazo komisiona miaraka, saingy tsy misy fiatraikany amin'ny hevitray izany. Ny Garmin Edge 530 dia solosaina bisikileta GPS feno endri-javatra kendrena amin'ireo mpitaingina bisikileta mpankafy matotra izay maniry fari-pandrefesana fahaiza-manao sy endrika fitetezana.
ny fomba fanidiana ny bisikiletanao
Aiza ny Charger amin'ny Garmin Edge 530?
Ny asan'ny 530 dia fehezin'ny bokotra ivelany fito miorina amin'ny sisiny, ary raha ny famandrihana (sy ny fifandraisana ara-batana amin'ny solosaina, raha ilainao izany) dia amin'ny alàlan'ny seranana micro-USB miafina ao ambanin'ilay sakan-tsorony amin'ny sisin'ny farany ambany amin'ny fitaovana, ie manatrika ny mpitaingina azy.
Mandra-pahoviana ny batterie Garmin Edge 530?
Ny fandehanana mitaingina dia tsotra toy ny fisafidianana ny mombamomba azy mety (azonao atao ny mamorona ny anao raha toa ka tsy mifanaraka aminao ny safidy default) ary manindry ny firaketana. Rehefa tapitra ny dia ataonao dia mijanona ianao ary manamafy fa te hamonjy ilay dia ianao. Ny Edge 530 dia toa miaina hatramin'ny mihoatra ny fe-potoana bateria naharitra 20 ora.